VOB Editor: Olee dezie VOB Video Files na Windows na Mac
> Resource> Video> Olee dezie VOB Video Files na Windows na Mac
The VOB faịlụ ndị nkiri data faịlụ site na DVD discs, na-agụnye video, audio, na ndepụta okwu. Ha na-a na-echekwara na VIDEO_TS nchekwa. Ọ bụrụ na ị nwere VOB fim ị chọrọ ọkụ n'ime DVD discs ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji hazie dọwara VOB faịlụ site cropping, trimming ma ọ bụ idebe mmetụta, i nwere ike mkpa a VOB nchịkọta akụkọ.
Part 1: Olee dezie VOB File
Part 2: Best Video edezi Software maka Beginners dezie VOB File
Wondershare Video Editor (Windows 8 na-akwado)-ukwuu tụrụ aro ka a dị ike VOB Video Editor. Ọ bụ kasị mfe iji na juru n'ọnụ na atụmatụ na kwesịrị gị ojuju afọ video edezi mkpa!
Ike VOB Video Editor:
Mfe ewepụtụ, bugharia, akuku, jikota na ikpokọta gị VOB video faịlụ;
-Eme ka ị VOB videos na pụtara ederede, iyo na mgbanwe mmetụta;
Advanced mmetụta dị ka Tilt-nnofega, Mozis, ima elu he, Face-apụ, na ndị ọzọ na-nyere;
Ọkụ gị VOB vidiyo na DVD, bulite jidesie Facebook na YouTube ma ọ bụ chekwaa dị iche iche formats.
Ntak emi Họrọ Wondershare VOB Editor
Video edezi adịghị nwere na-mgbagwoju anya dị ka ogologo oge ị na-eji nke a VOB video nchịkọta akụkọ. The kensinammuo imewe na-eme niile edezi nhọrọ mfe ohere onye ọ bụla.
Ike edezi Ọrụ
Mfe ewepụtụ, bugharia, akuku, bee vidiyo na usoro iheomume, ma ọ bụ ezi-na-akụ ìhè, iche, na-egwu ọsọ, olu ọdịyo, pitch na edezi window.
Dị iche iche Video mmetụta
-Eme ka ị VOB videos site na àjà egwu ikwu n'ụzọ, Intro / akwụmụgwọ, utu aha na nzacha. Advanced mmetụta dị ka PIP, Tilt-nnofega, ima elu Cut na ndị ọzọ na-nyere.
Dị iche iche Ịkekọrịta Ụzọ
Dị iche iche video nkekọrịta ụzọ n'ihi na ị na-ahọrọ: kpọmkwem bulite jidesie YouTube na Facebook, mee ka ọ dakọtara na ngwaọrụ ndị ọzọ, ọkụ a DVD collection.
Olee otú Easily Dezie VOB Video:
1. jikota, Kpaa, Split VOB Videos
Jikota: ịdọrọ VOB faịlụ na ị chọrọ iji sonyere na na video track nke usoro iheomume, ha ga na-akpaghị aka jikota ọnụ seamlessly.
Ewepụtụ: òké n'elu ekpe ma ọ bụ nri ihu a video clip on usoro iheomume, mgbe a "abụọ akụ" ngosi apụta, dị nnọọ Dọga ewepụtụ ya ọ bụla ogologo ị chọrọ.
Split: gbawaa gị videos n'ime ọtụtụ agba, dị nnọọ egwu gị Video video, ịdọrọ slide mmanya na preview window gị chọrọ ọnọdụ, pịa "kwụsịtụ", na mgbe ahụ họrọ "gbawara n'etiti", gị video ga-kewara abụọ n'akụkụ.
2. akuku, bugharia, tụgharịa, Gbanwee ihie, Speed, wdg
Chetara video clip na pịa Dezie na akara ngosi na toolbar, ị ga-aga na edit window. Ihe ọ bụla ị chọrọ, dị nnọọ na-nri ngwá ọrụ na aka gị, gụnyere video edezi (akuku, bugharia, tụgharịa, ọsọ, nchapụta, iche, saturation) na audio edezi (olu, ịjụ oyi na / si, pitch, wdg).
3. Tinye utu aha, mmetụta, PIP, mgbanwe, Intro / Ebe E Si Nweta, wdg
Ọ bụ ezigbo mfe tinye utu aha, mmetụta, PIP, mgbanwe, Intro / Ebe E Si Nweta, wdg na nke a VOB nchịkọta akụkọ, ime ka a niile na ọrụ nwere ikpuru-n-dobe atụmatụ. Ka ihe atụ, ka ịgbakwunye ikwu n'ụzọ na video, dị nnọọ pịa "Transition" taabụ ma bulie otu template, ikpuru na dobe ya na usoro iheomume. Ịnwere ike ihuchalu ọhụrụ video ozugbo. Ma ọ dị mkpa, abụọ pịa kwukwara ihe ka hazie ya.
Part 2: Best Video edezi Software maka Beginners dezie VOB File (Video Tutorial)
Olee ka jikota VOB Videos
Olee otú SPLIT VOB Video Files
Olee otú iji tọghata VOB ka MP4